CNC Turning Centre၊ တရုတ် CNC စက်ခုံစက်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများတရုတ်
+ 86-15318444939 အီးမေးလ်: Sales@tsinfa.com
CNC Universal စက်စက်
ဟိုက်ဒရောလစ် Sheet Metal ညှပ်စက်
ကုန်းနှီး Moving Surface Grinder TSA40100
ကုန်းနှီး Moving Surface Grinder TSA2050
လက်စွဲ Surface Grinder M618
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ်1 / CNC Turning Centre, CNC ခုံစက်၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ ...
မြင့်မားသော PRECISION MULTI AXIS CNC လှည့်စင်တာ
Tsinfa သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိ CNC လှည့်စက်ကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ စီအင်စီလှည့်စင်တာတွင်ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များ၊ မြင့်မားသောစက်အရည်အသွေးနှင့်အမြန်နှုန်းရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် rotary အစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် cylindrical မျက်နှာပြင်၊ conical မျက်နှာပြင်၊ အလင်းဆုံမျက်နှာပြင်၊ တူးဖော်ခြင်း၊ groove groove နှင့် thread processing တို့သည်အလိုအလျှောက်ပြုလုပ်နိုင်သော hyperboloid ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော rotary မျက်နှာပြင်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၀ င်ရိုးအမျိုးမျိုးကို ၀ ယ်လိုအားအရထပ်မံပေါင်းထည့်နိုင်သည်။ ဂရိုးရိုးအခ၊ ဝင်ရိုး ၃ ချက်၊ ၂ ဝင်ရိုးခေါက်၊ ၅ ဝင်ရိုး CNC ခုံ၊ ၄ ဝင်ရိုး CNC ခုံ။
မြင့်မားသောထိရောက်မှု: CNC အလှည့်ကျရာဌာန၌, အပိုပစ္စည်းတစ်ချိန်ကညှပ်ပြီးနောက်, သူကလှည့်အစိတ်အပိုင်းများ, ကြိတ်, တူး, ပတ္တာ, ချည်အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်အခြားအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုဖြည့်စွက်နိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသောတိကျမှု: CNC ခုံသည် servo မော်တာကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုပြီးဘောလုံးဝက်အူ drive slip slip ပန်းကန်နှင့်ကိရိယာကြွင်းသောနေရာများမှအစာကျွေးမှုရွေ့လျားမှုကိုနားလည်ရန်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုသည်။
မေးခွန်းများ? သို့မဟုတ်စျေးနှုန်းတစ်ခုလိုအပ်ပါသလား+ 86-15318444939 သို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သူကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်နှင့်စကားပြောပါ။သင်တို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့: ဖြည့်စွက်နိုင်သည်: အဆက်အသွယ်ပုံစံ။
ရောင်းရန် CNC အလျားလိုက်အလှည့်စက်:
TFA40 CNC လှည့်စက်
အလှည့်အချင်း ၄၀၀ မီလီမီတာ၊ ၃၀ / ၄၅ ဒီဂရီစောင်းအိပ်ရာ၊
TFA40-S CNC သည်ဗဟို ၀ င်ရိုးကိုလှည့်သည်
၈ ဘူတာဖြတ်စက်၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တူးခြင်း၊
TFA40B slant bed CNC ခုံ2ဝင်ရိုး
အလှည့်အချင်းသည် ၄၀၀ မီလီမီတာ၊ ပြုပြင်မှုအရှည် ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ မီလီမီတာနှင့်ချစ်ပ်ဖယ်ရှားရေးစက်ကိုအလိုအလျောက်ချစ်ပ်ဖယ်ရှားခြင်းအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
TFA-8S CNC လှည့်စင်ဗဟို4ဝင်ရိုး
၈ ဘူတာလှည့်သည့်ကိရိယာမျှော်စင်၊ ၉၀ ထောင့်ပါဝါခေါင်းလေးလုံး၊ လေးထောင့်လေးထောင့်ပါဝါခေါင်းများ
TFA50 CNC လှည့်စင်တာ
LTK စီးရီးပြားချပ်ချပ် CNC ခုံစက်
စျေးပေါစျေးနှုန်း, အချင်း 360-16000mm, စက်အရှည် 500-5000mm,
CNC လှည့်စက်၏အားသာချက် -
အလိုအလျောက်မြင့်မားသောဒီဂရီ - ထိန်းချုပ်မှုအတွက်စီအင်စီစနစ်၊ ပရိုဂရမ်အတွက်အပြောင်းအလဲအတွက်နည်းပညာအရ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များစွာကိုတစ်ချိန်တည်းပြီးစီးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဟိုက်ဒရောလစ်အပေါက်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီးထိုင်ခုံနှင့်အလိုအလျောက်တင်ဆောင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက်စက်ရုပ်လက်မောင်းနှင့်တပ်ဆင်ထားသည်။ ၎င်းသည်လုပ်အားကိုများစွာသက်သာစေပြီးထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။
အဆင်ပြေသော chip ကိုဖယ်ရှားခြင်း - optional tilt bed, သံချစ်ပ်သည်သဘာဝအရချစ်ပ်များစုဆောင်းခြင်းသေတ္တာထဲသို့ကျသည်။
ကောင်းမွန်သောလုံခြုံမှု - အပြည့်အဝပူးတွဲကာကွယ်ထားခြင်းကိုခံယူထားပါသည်။
မြန်နှုန်းမြင့် - ဗိုင်းလိပ်တံအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မြန်နှုန်းကို 1600 မှ 4500 Rpm အထိရရှိနိုင်သည်
သမားရိုးကျချွေတာသုံးစွဲသော CNC ခုံများတွင် X နှင့် Z တို့ပါ ၀ င်သည်။ အလှည့်ကျသောဗဟိုတွင်ပုဆိန်များစွာ၊ ပုဆိန် ၃ ခု၊ လှည့်ခြင်းနှင့်ကြိတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုအပြင်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည်။ ညှပ်အချိန်နှင့်အချိန်ကိုလျှော့ချသည်။
အချုပ်အားဖြင့် CNC လှည့်စင်တာတွင်အောက်ပါလက္ခဏာများရှိသည် -
(၁) ခိုင်မာသောအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်း၊ မျိုးစုံနှင့်သေးငယ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။
သမားရိုးကျအလိုအလျောက်သို့မဟုတ် Semi-automatic ခုံတွင်အစိတ်အပိုင်းအသစ်တစ်ခုကိုပြုပြင်သည့်အခါအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်စက်ကိရိယာသို့မဟုတ်စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုယေဘုယျအားဖြင့်ချိန်ညှိရန်လိုအပ်သည်။
စက်ကိရိယာသည်အပိုင်းအစများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်၊ CNC ခုံကို သုံး၍ မတူညီသောပုံသဏ္partsာန်အစိတ်အပိုင်းများကိုလုပ်ဆောင်သောအခါ၎င်းသည်စက်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သို့မဟုတ်ပြုပြင်ရန်သာလိုအပ်သည်။
ပရိုဂရမ် (software) သည်အပြောင်းအလဲလိုအပ်ချက်များကိုအလျင်အမြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပြီးစက်၏ဟာ့ဒ်ဝဲနေရာတွင်အစားထိုးခြင်းအတွက်နည်းပညာပြင်ဆင်မှုအချိန်ကိုများစွာတိုစေနိုင်သည်
မြင့်မားသောနည်းပညာအသစ်များဖြစ်သောစက်နှင့်လျှပ်စစ်ကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်မှုကြောင့် CNC စက်ကိရိယာများ၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာတိကျမှုသည်သာမန်စက်ကိရိယာများထက်ယေဘုယျအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ CNC စက်ကိရိယာများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။
သို့သော် CNC စက်ကိရိယာသည်ရည်မှန်းချက်ပြည့်မီရန်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်ပရိုဂရမ်ကိုသာလျှင်ပြုစုသည်၊ လိုအပ်လျှင်ကွန်ပျူတာတွက်ချက်သည့်ပရိုဂရမ်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုတွက်ချက်နိုင်သည်။
ကွန်ပျူတာဖြင့်ကူညီသောအပြောင်းအလဲ။ ထို့အပြင် CNC စက်ကိရိယာ၏စက်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အော်ပရေတာ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကြောင့်မထိခိုက်ပါ။
အထူးသဖြင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏အစိတ်အပိုင်းများအတွက်၊ အသုတ်ကြီးလေလေ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းလေဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်၏တည်ငြိမ်မှု၊ ယင်း၏အပြောင်းအလဲနည်းပညာနှင့်တစ်ခုတည်းသောအသုတ်ကွဲပြားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, လ်တာရွေးချယ်ရေး, tool ကိုလမ်းကြောင်းအစီအစဉ်နှင့် tool ကိုအစီအစဉ်
ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများနှင့်မြင့်မားသောတိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများ။ ဒုတိယတစ်ခုမှာထုတ်လုပ်မှုတစ်ခု၏အောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည်။ တစ်ယူနစ်ထုတ်လုပ်မှု
အသုံးပြုသော NC လုပ်ငန်းစဉ်သည် tool path, tool စီစဉ်နှင့် tool change point setting ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားသည်။ နှင့်အသုတ်ထုတ်လုပ်မှု
အလှည့်စင်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်စီအင်စီခုံတွင်အထပ်ပေါင်းများစွာထပ်မံထည့်သွင်းခြင်းကိုရည်ညွှန်းသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်အခ့ the လည်ပတ်မှုသည်အလှည့်လုပ်ဆောင်မှုသာမကသာမကကြိတ်ခွဲခြင်းလည်းပါ ၀ င်သည်။ စက် ၀ င်ရိုး ၃ ခု၊
1. Spindle သည်အမြန်နှုန်းဖြင့်လှည့်သောအခါ၊ ဖြတ်ထုတ်နေသောအရည်သည်လည်ပတ်နေသောအရာဝတ္ထုပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
၄. ပရိုဂရမ်အမှားကြောင့် tool collision ဖြစ်နိုင်တယ်။
အထက်ပါစွန့်စားမှုများကြောင့် ၀ န်ထမ်းများသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအတွက်လုံခြုံရေးလက်စွဲကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်
၂။ ယုံကြည်စိတ်ချရသော Chuck ကိုအသုံးပြုသောအခါ workpiece ကိုညှပ်သည့်အခါ Chuck ကိုစစ်ဆေးပြီးသော့ခတ်ပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အကာအကွယ်ပေးသည့်တံခါးကိုပိတ်ပါ။
၃။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုလုံခြုံစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်မှန်ကန်သော grounding ။ လျှပ်စစ်မီးမရှိဘဲပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြုပြင်ပါ။
- ထုတ်ကုန်များကို CNC ကြိတ်ခွဲခြင်းမှပြုလုပ်သည်
ထိုကဲ့သို့သောလှုံ့ဆျောမှုအမျိုးမျိုး, လေလမ်းပြဘီး, အလင်းဆုံမျက်နှာပြင်, မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းအမျိုးမျိုးတို့ကို, ပန်ကာနှင့်ရေအောက်မော်တော်ယာဉ်ပန်ကာနှင့်အခမဲ့ - ပုံစံမျက်နှာပြင်အချို့သောအခြားပုံစံမျိုးစုံအဖြစ်, ထိုကဲ့သို့သောအစိတ်အပိုင်းများစက်စင်တာအားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါတယ်။ ပေါင်းစည်းထားသည့်လှုပ်ခါခြင်း၊ ဆေးထိုးခြင်းမှို၊ ရော်ဘာမှို၊ ဖုန်စုပ်စက်မှို၊ ရေခဲသေတ္တာအမြှုပ်မှို၊ ဖိအားများသွန်းလောင်းခြင်း၊
CNC ခုံသည်ထုတ်ကုန်များစွာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်၊ တစ်ကြောင်းချင်းစီစာရင်းပြုစုရန်ခက်ခဲသည်။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် CNC ခုံသည်အဓိကအားဖြင့် shaft, sleeve, disc၊
အစိတ်အပိုင်းများကိုလှည့်ရာတွင်အဘယ် CNC စက်ကိုအသုံးပြုသနည်း။
Turning သည် workpiece ကိုလှည့်ပြီးစက်ကိုကိုင်ဆောင်ထားပြီး tool feed ကိုမောင်းသောစက်လည်ပတ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောစက်မျိုးကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သောခုံများမှာ -
CNC အလျားလိုက်токခုံစက်၊ CNC ဒေါင်လိုက်စက်၊ CNC လှည့်စက်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ CNC လှည့်စင်တာမှာ linear နဲ့ circular interpolation function တစ်ခုရှိပြီးအချို့ CNC လှည့်စင်တာမှာ non-circular interpolation function အချို့ရှိတယ်။
ကွေး Interpolation ၏ function ကိုအတူကလျောက်ပတ်တွက်ချက်မှတဆင့်အစိတ်အပိုင်းများအပါအဝင်မည်သည့်လေယာဉ်ကွေးပုံ၏ရေးစပ်လည်ပတ်အစိတ်အပိုင်းများကိုလှည့်နိုင်ပါတယ်။
အစိတ်အပိုင်းများ၏တိကျမှန်ကန်မှုလိုအပ်ချက်များသည်အဓိကအားဖြင့်အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္,ာန်၊ အနေအထားနှင့်မျက်နှာပြင်၏တိကျမှုလိုအပ်ချက်များကိုရည်ညွှန်းသည်
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရှုထောင်တိကျမှန်ကန်မှုသည်မြင့်မား။ ဆလင်ဒါလိုအပ်ချက်များနှင့်မြင့်မားသောဆလင်ဒါအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်။
မျဉ်း၏ဖြောင့်ခြင်း, roundness နှင့်အကွံများအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အတူ Cone အစိတ်အပိုင်းများ; လိုင်းပရိုဖိုင်းအတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အတူအစိတ်အပိုင်းများ (ဒဏ်ငွေပုံသဏ္shapeာန်)
အထူးတိကျသော CNC ခုံတွင်ဂျီ ometric မေတြီပုံ၏တိကျမှုကိုလည်းအလွန်မြင့်မားစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ခိုင်မာ workpiece ၏ 3. ထုတ်ယူခြင်း
ဒါဟာသူတို့ရဲ့ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့်ခိုင်မာအစိတ်အပိုင်းများကြိတ်ရန်ခက်ခဲသည်, \_ t
ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူ 4.Work အပိုင်းအစ
အဆိုပါအပိုပစ္စည်းအပြင်ဘက်စက်ဝိုင်း, အဆုံးမျက်နှာ, ဘေးထွက်အပေါ်ကြိတ် groove, တူးလှည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဤအပိုင်းအစတွင်စက်ကိရိယာသုံးမျိုးလိုအပ်သည်။ ခုံများ၊ ကြိတ်စက်များ၊ တူးဖော်သည့်စက်များ၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ခြင်းနှင့်ချခြင်းအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။
စက်အစိတ်အပိုင်းများကို CNC လှည့်
အကယ်၍ ကိန်းဂဏန်းများပါ ၀ င်သည့်လက္ခဏာများအရခွဲခြားထားလျှင်ပြန်လည်ပေါင်းစပ်။ မရနိုင်သောလ်တာများနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
ခုံတွင်အများအားဖြင့် workpiece သို့မဟုတ် cylindrical positioning အလွတ်များအသုံးပြုသည်။
ဖောက်သည်၏မတူညီသောလိုအပ်ချက်များအရသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်ကိုလက်ဖြင့်လျှပ်စစ်၊ အထွေထွေဟိုက်ဒရောလစ်ကို ဗဟိုပြု၍ ဗဟိုချက်ဖွင့်ခြင်း၊ အလိုအလျောက်မြင့်မားခြင်း။ အသုတ်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အသင့်လျော်။
သမားရိုးကျခုံများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အများအားဖြင့်စီအင်စီမှခုံများမှာယေဘုယျအားဖြင့် CNC ကိရိယာမျှော်စင်ကိုအသုံးပြုပြီးဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်တည်ဆောက်ပုံများဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်ရန်ဘူတာ ၄ ခု၊ ဘူတာ ၈ ခုနှင့်ဘူတာ ၁၂ ခုရှိသည်။ ဘူတာများလေလေစျေးနှုန်းများလေလေဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားသောမောင်းနှင်မှုအမျိုးအစားများကိုဟိုက်ဒရောလစ်တာဝါနှင့်လျှပ်စစ်တာဝါတိုင်များခွဲခြားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓားမိုးမျှော်တာစျေးနှုန်းသည်အတော်လေးဈေးချိုသည်။ ပရိုဂရမ်ကို CNC စနစ်သို့ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်၊ CNC system output output အချက်ပြစက်သို့အလိုအလျောက်ကိရိယာပြောင်းလဲခြင်း မြင့်မားသောထိရောက်မှု။
အမြီးနှင့်အံသည်အတူတူအလုပ်လုပ်ကြသည်။ အမြီးထိုင်ခုံတွင်လက်စွဲအမြီးထိုင်ခုံ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အမြီးထိုင်ခုံ၊
ချစ်ပ်ဖယ်ရှားပေးသည့်စက် - အလှည့်ကျသည့်စင်တာကိုပြုလုပ်သည့်အခါအချိန်ကြာမြင့်စွာစုဆောင်းရန်လွယ်ကူသောအပိုင်းအစကိုဖြတ်ပစ်လိမ့်မည်။ chip ဖယ်ရှားခြင်းအတွက် chip ဖယ်ရှားစက်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ပေါင်းစပ်ဆေးကုသမှုအတွက်သံမဏိများကိုသံချည်မျှင်မှတစ်ဆင့်ပြင်ပယာဉ်သို့သယ်ဆောင်သည်။
အလျားလိုက်သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်း Band Saw
သင် CNC စက်အကြောင်းသိရန်လိုအပ်သမျှ
Metal Lathe အသုံးပြုနည်း - Gap Bed Lathe စက်လည်ပတ်မှု
Metal Lathe Machine ဆိုတာဘာလဲ? အသုံးပြုမှု, အဓိပ္ပါယ်, စစ်ဆင်ရေး, အစိတ်အပိုင်းများ, ပုံကြမ်း
ခုံစက်နိဒါန်း: ၁၆ ခုံစက်အမျိုးအစား
စက် Tool ကိုတရုတ်ပေးသွင်း
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-15318444939
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-632-5656658
7 * 24 နာရီ
အမှတ် ၆ စက်မှုဇုန်ဥယျာဉ်၊ Dadi လမ်း၊ Tengzhou၊ Shandong, China
မူပိုင် ၂၀၁၀-၂၀၃၀ © Shandong Tsinfa CNC Equipment Co. , Ltd